GTT International - Genève: FANAMBARAN'NY GTT INTERNATIONAL - GENEVE.
FANAMBARAN'NY GTT INTERNATIONAL - GENEVE.
Mikatso tanteraka ny fahitanay ny fizotran’ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Tsy mandeha amin’ny laoniny intsony ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny. Mivoana tanteraka amin’ny tanjona napetraka (famerenana ny ara-dalàna) ny Tolona. Tsy nitondra tombotsoa ho an'ny fampandrosoana ny tolona sy ny famerenana ny ara-dalàna ary ny fampodiana ny Filoha RAVALOMANANA ny fiaraha-mitantana nofinidin'ny mpitarika ny ankolafy.
- Aiza izao ny fanatontosana ireo andininy (articles) izay nahatonga ny Ankolafy Ravalomanana nanao sonia, izany hoe: famoahana ny gadra politika, ny fisokafan’ny haino aman-jery ary indrindra ny fodian’ny Filoha Ravalomanana (andininy faha 20)?
- Nilaza mazava ny tokony hialàna tsy misy hatak’andro ao amin’ny rafitra ny Filoha tamin’ny 30 Avril. Kanefa fiantonana (suspension) no navalin’ireo izany.
- Ao koa ny Hetsika izay nahatonga ny fahatezeran’ireo mpitolona rehetra (12 Mai sy 13 Mai). Ny tompon’andraikitra amin’ny tsy fahombiazan’ny Tolona dia ny fidiran’ny Ankolafy Ravalomanana tao anaty Rafitra, ary indrindra nanaiky sy niray asa tamin’ireo mpanonga-mpanjakana.Taiza ny mpitarika tamin’ireo hetsi-bahoaka ireo ?
Very fanahy mbola velona ny vahoaka manoloana izany ka nirenireny tsy nisy mpitarika toy ny kamboty. Tezitra sy mahatsiaro voafitaka izy ireo. Ao ny teny etsy sy eroa milaza hoe : “Mpitari-tolona mpamadika, voavidy, sns...”.
mangataka an'Atoa Mamy Rakotoarivelo sy ireo rehetra niara dia taminy niditra io Rafitra tetezamita sandoka io hiala ny Ankolafy RAVALOMANANA ary tsy hitondra intsony ny anaran’ny Filoha. Tsy misy manakana azy ireo sy izay miray hevitra sy tanjona aminy hamorona ankolafy hafa. Mazava kokoa ny raharaha amin’izay ary tsy ho voafitaka sy voambaka intsony ny vahoaka tena mitolona ho an’ny Filoha,